Guqula idesimali ulungelelwaniso lwejografi ukuya kwiidigri, ukuya kwi-UTM kwaye uzobe kwi-AutoCAD-Geofumed
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/Guqulela zika ethile ngeshumi, UTM nokuzoba in AutoCAD
Guqulela zika ethile ngeshumi, UTM nokuzoba in AutoCAD
Le template ye-Excel yenziwe ekuqaleni ukuguqula ulungelelwaniso lwejografi kwi-UTM, ukusuka kwifomathi yedesimali ukuya kwiidigri, imizuzu kunye nemizuzwana. yintoni kanye ngokuchasene netemplate ebesiyenze ngaphambili, njengoko kubonakala kumzekelo:
Ziguqule zibe zilungelelaniso UTM, ngokhetho lokukhetha iDatum
Qhagamshelana nomyalelo wenqaku ukwenza amanqaku kwi-AutoCAD ngeKopi / uncamathisele enye
Nxibelelanisa umyalelo wepolyline ukuzoba ukunqumla nge Khuphela/uncamathisele
Umsebenzi wokuguqula ulungelelwaniso lwejografi kwi-UTM lwenziwa njani:
Ukumisela imimandla yegalelo, iipropati zifakwe kwiiseli. Oku kwenziwa ngeDatha tab, kukhetho lokuqinisekisa idatha. Sikhetha ukuba ixhasa kuphela idatha yedesimali phakathi kwe -180 kunye ne-180, eyona nto ixhasa ubude. Kwaye ke kumyalezo wemposiso ithi idatha ayivumelekanga. Kwimeko yobubanzi, ibonakaliswe phakathi kwe -90 kunye ne-90.
Ukukhetha i-hemisphere kubude, obukukholomu G, iseli ibekwe kwimeko, ukuze ukuba ulungelelwaniso lubi, umbhalo u-W ubhaliwe, ukuba ulungile, isicatshulwa E sibekwe.
Oku kwenziwa ngefomula =EWE(G37<0,”W”,”E”)
Ngendlela efanayo nezibanzi ezikuluhlu H, ukuba ulungelelwaniso lunegethivu, unobumba u-S ubhaliwe, ukuba u-positive, unobumba ongu-N.
Ifomula iya kuba =EWE(H37<0,”N”,”Y”)
Ukukhupha idigri, ixabiso elipheleleyo liyasetyenziswa kwaye inani licuthwa libe ziindawo zedesimali eziziro. =ABS(TRUNCATE(G37,0)) ngale ndlela i -87.452140 iya kuba ngama-87
Ukukhupha imizuzu, ixabiso lokuqala lithatyathwa kwixabiso elincitshisiweyo, ukwenzela ukuba kuphela i-decimals eseleyo (0.452140) kwaye elo xabiso liphindwe ngama-60, inani elipheleleyo lemizuzu kwiqondo. Inqunyulwe yaya kutsho ku-zero decimal iindawo kwaye ke ifunyenwe ukuba kwi-0.452140 kukho imizuzu engama-27 = TRUNCATE((ABS(G37)-J37)*60,0)
Ukufumana imizuzwana, phinda-phinda idecimals (0.452140) ngo-3600, elinani lemizuzwana kwisidanga (60×60), kwaye uthabathe into esele siyithathile, eyimizuzu (27) iphindaphindwe ngama-60. ukusondezwa kusetyenziswa, ngereferensi yeseli apho inani leedesimali likhona ukuze ibenokulungelelaniswa kwincasa. Ngaloo ndlela, kukho imizuzwana engama-7.704. =REDONDEAR((((ABS(G37)-J37))*3600)-(K37*60),$L$5)
Ukudibanisa umyalelo wenqaku, umtya _point usetyenziswa, ukuze kuphela iiseli zikopishwe kumgca womyalelo we-AutoCAD. =CONCATENATE(“_inqaku “,UMJIKELO(S37,2),”,,UMJIKELO(T37,2)). Ngokufanayo umyalelo we-polyline =CONCATENATE(“_pline “,ROUND(S37,2),”,”,ROUND(T37,2)). Ukujikeleza kusetyenziswa ukwenzela ukuba iintambo zingabi zinde kakhulu.
Kwi template kukho iingcebiso zokwenza esi senzo sokugqibela.
Ukusuka apha unokukhuphela ithempleyithi, uhlawula ngayo Ikhadi lesikweletu okanye i-Paypal.
Uqalise i-Bentley Descartes entsha v8i
Iifayile ze-3 ze-Wordpress ezifanelekileyo ukutshala imali
Ndixelele ukuba kuqhubeka ntoni engaqhelekanga.
Ukuba uthenge ithempleyithi, cela inkxaso nge-imeyile ofumene ngayo ikhonkco lokukhuphela
Othandekayo, ukuguqulwa kwi-UTM akuchanekanga, amaxabiso angalunganga aphuma, ndicela undincede ukuba ndenza into engalunganga.
Ndiyayibulela inkcaza yakho kodwa awuyiqondanga. Inqaku lichaza kakuhle ukuba ungayenza njani ngokwakho, njengokuba ndenzayo.
Jonga i-imeyile, kuquka ne-spam. Ukuba uneengxaki ezininzi, qhagamshelana nathi kwi-imeyile evela kwirisithi yakho.
Ngaba unokundinceda nceda, ndenze ukuthenga ngekhadi lam kwaye andikwazi ukukhuphela itemplate nceda uncede
Yonke itemplate isimahla kwiiveki ezimbini zokuqala emva kokupapashwa, emva koko ukukhuphela kuhlawuliswa.
I-vibes embi ukuba bathengise iitemplates, ndiyazi ukuba kwakunzima kangakanani ukuzenza kodwa siza kwenza ntoni, abahlobo be-Geofumadas avaces banzima kakhulu hahaha. 🙂
Sele yenziwe yasebenza.
Ndingathanda ukuhlawula ezininzi zezityalo ezilapha kwaye andinako
Ndingakhuphela phi; itemplates kwaye ngakumbi ngokucacileyo awukwazi (ngokuqinisekileyo ngentlawulo ye-paypal) enkosi
UROBERT CORNEJO uthi:
OKUBALULEKILEYO! ENKOSI NGOKWABELANA NGOLWAZI.
jose manznao medina uthi:
UNXIBELELWANO olugqwesileyo NJENGESITHUBA SOLWAZI
Isixhobo esiluncedo kakhulu, sandinceda kakhulu, enkosi bahlobo, imibuliso evela kwilizwe laseGuanajuato, eMexico
ISIXHOBO ESIBALULEKILEYO SINDIKHONZE NGOKUMANGALISAYO
Itemplate entle kakhulu….umsebenzi ogqwesileyo!! Masinwabe
Guqula iifayile AutoCAD bulk / Microstation